အလုံရှိငှါးရန်ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်းများ | iMyanmarHouse.com
အလုံမြို့နယ်ရှိငှါးရန်ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်းများ
အလုံလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်ရှိ ပြင်ဆင်ပြီး ဆိုင်ခန်း_ရုံခန်းဖွင့်ရန်အဆင်ပြေသော လုံးချင်း(၅)ထပ်တိုက် #ငှားပါမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19776529 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကမ်းနားလမ်း မပေါ် 5ထပ်တိုက် ငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19779610 အတွက် Golden Garden Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19776529 အတွက် Golden Garden Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အလုံ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ရုံးခန်းငှားရန်ရှိသည်။
139 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19578868 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မင်းရဲကျော်စွာလမ်း/အလုံမြို့နယ်တွင် ပြင်ဆင်ပီး ရုံးခန်း ငှါးမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19576952 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အလုံ ကမ်းနားလမ်း မပေါ် 5ထပ်တိုက် ငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19779585 အတွက် Golden Garden Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ၊ အလုံမြို့နယ်သည် အကျယ်အဝန်း ၄ ကီလိုမီတာရှိပြီး ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၁ ခုတည်ရှိသည် ။ မြို့နယ်၏ မြောက်ဖက်တွင် စမ်းချောင်းမြို့နယ် ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် ၊ အနောက်ဖက်တွင် ရန်ကုန်မြစ် ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဒဂုံမြို့နယ်နှင့် တောင်ဖက်တွင် လမ်းမတော်မြို့နယ် တိုဖြင့်ထိဆက်လျက်ရှိသည် ။ အလုံမြို့နယ်တွင်း ကရင်လူမျိုးအမျာအပြားနေထိုင်သည့် ကရင်ခြံရပ်ကွက်တည်ရှိပြီး ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း လည်း အများပြားတည်ရှိသည့် မြို့နယ်ဖြစ်သည် ။ ကွင်းကျောင်းလမ်းတွင်တည်ရှိသည့် ကွင်းကျောင်း ကျောင်းတိုက် သည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာဘာဝင်များအတွက် မြို့နယ်တွင်း အထင်ကရကျောင်းတိုက် ဖြစ်သည် ။ အခြားသော ဘာသာခြားလူမျိုးစု အတင့်အသင့်ထိုင်ပြီး ဗလီ ၁ ခုနှင့် ဟီန္ဒူဘုရားကျောင်းနှစ်ကျောင်းရှိသည် ။ မြို့နယ်၏ အနောက်ဖက် ရန်ကုန်မြစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မှုတွင်အရေးပါသော အေးရှားဝေါဆိပ်ကမ်း နှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်းတည်ရှိသည့်မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ ပြည်သူများအပန်းဖြေရန်အတွက် သခင်မြပန်းခြံသည်လည်း မြို့နယ်တွင်း အထင်ကရတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဟိုယခင်က ရန်ကုန်မြို့တစ်မြို့လုံးအတွက် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ၊ အသားငါးများကို အဓိကဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည့် သီရိမင်္ဂလာဈေးဟောင်းကြီးရှိခဲ့သော မြို့နယ်လည်းဖြစ်သည် ။ ယခုအခါမှာတော့ အဆိုပါဈေးကြီးကို လှိုင်မြို့နယ်တွင် ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ်စေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည် ။ မြို့နယ်တွင်းနေထိုင်သူများအတွက် လူနေတိုက်ခန်းများ ၊ အိမ်ရာဝန်းများ ၊ လုံးချင်းအိမ်နှင့် မြေကွက်လက်အချို့ကျန်ရှိနေသေးသည့်မြို့နယ်ဖြစ်သလို အသစ်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးများလည်း တည်ရှိသည့်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ။